काखी कालो छ ? अव यसो गर्नुस् , घर भित्रै छ उपचार (विधिसहित)
एजेन्सी । काखी मुनि कालो हुने समस्याले धेरै युवतीलाई सताइरहेको हुन्छ । गर्मी मौसममा छोटा तथा फेसनको कपडा लगाएर हिड्न नपाउँदाको पीडाले धेरै युवतीहरु चिन्तित भएको पाइन्छ ।
यो सवै युवतीको साझा समस्या जस्तै भइसकेको छ ।
काखी मुनि कालो हुनुको कारण हामी रेजर, वाक्सको प्रयोगले भन्ने गलत धारणा पालिरहेका हुन्छौ तर यसको एउटै मात्र कारण यो हो कि हामी अनुहारजस्तै काखीको हेरचाह गर्दैनौ ।
जसरी अनुहारमा हामी क्लिन्जीङ, मेकअफ तथा विभिन्न ब्यूटी टिट्मेन्ट गर्ने गर्छौ तर काखीको बारेमा कहिल्यै हेरचाह गर्ने गर्दैनौ । जसरी अनुहारमा डेड सेल जम्मा हुन्छ त्यसैगरि काखीमा पनि जम्मा हुन्छ र कालो हुन्छ ।
यदि काखीको पनि अनुहारको जस्तै ख्याल राख्ने हो भने यो विस्तारै सेतो र सफा बन्दै जान्छ ।
कसरी घरमै बसी बसी काखीको कालोपन हटाउने रु जान्नुहोस् केहि टिप्सहरुः
जव तपाई आफ्नो अनुहारमा धेरैथरि टिटमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसैगरि अनुहारसँग र्सँगै काखीमा पनि लगाउने गर्नुपर्छ ।
कसरी तयार पार्ने मास्क ?
एउटा सफा कचौरा लिनुहोस् ।
त्यसमा एक चम्चा टमाटरको रस राख्नुहोस् ।
दूई चम्चा बेसनको पिठो मिसाउनुहोस् ।
त्यसपछि एक चम्चा काचोँ दुध मिसाएर गोल्नुहोस् ।
त्यसपछि एक बोतलमा एक चम्चा गुलाब जलमा एक चम्चा कागतीको रस मिसाएर राख्नुहोस् ।
त्यसपछि काखीलाई सफा पानीले पखालेर तयार भएको लेप अनुहारमा प्याक लगाएजस्तै लगाउनुहोस् । र १५ मिनेट पछि पखाल्नुहोस् ।
साथै तयार भएको गुलाब जल र कागती पानीलाई हरेक रातमा लगाएर सुत्ने गर्नुहोस् ।
यसो गर्नाले केहि दिनमै काखी सेतो हुँदै जानेछ ।